နတ္ထိရဲ့ ပဟေဠိ | နတ္ထိ
« နတ္ထိရဲ့ ဓမ္မပဒ
နတ္ထိရဲ့ ပုထုဇဉ် »
“Code Is Poetry” လို့ ပြောကြတယ်။ အတော် ရသမြောက်ပါတယ်။ အခုက Programming နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ပါဠိဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ Poetry Is Code လို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေတယ်။ ပါဠိနဲ့ Coding လုပ်ထားတာလို့ ဒီဂါထာလေးကို အကဲခတ်မိပါတယ်။ တစ်ကြောင်း ၈ လုံး, ၄ ကြောင်း ဆိုတော့ ဂါထာ အသွင် ဆောင်ပါတယ်။ တစ်ကြောင်း ၈လုံးမှာ ရှေ့ ၄လုံးကို ပဋိလုံ ပြန်ပြီး နောက် ၄လုံးကို ရေးထားတယ်။ ရေးဖွဲ့ထားပုံ အတော် ပီပြင်ပါတယ်။
ပါဠိစာပေမှာ ပုဒ်ပါဌ်အက္ခရာတွေရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ကြံဆတဲ့အခါမှာ အသုံး ပြုဖို့ရာ ရှေးဆရာတို့က ဒီလို ရေးထားတယ်….
ပဌမံ ကရေ ပဒစ္ဆေဒံ ၊ သမာသာဒိံတတော ပရေ၊
သမာသာဒိံတတော ပစ္ဆာ ၊ အတ္ထံ ဇာနေယျ ပဏ္ဍိတော။
အဓိပ္ပါယ်က…ပါဠိစာကို တွေ့တာနဲ့ ပထမဆုံး ပုဒ်တွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ရမယ်။ ပြီးတော့ ပုဒ်တွေရဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို သုံးသပ်ရမယ်။ ဒီလို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်လေ့လာပြီးရင် အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါက အခြေခံ နည်းစနစ်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အဓိပ္ပါယ်က လျှို့ဝှက်တိမ်မြုတ်နေတဲ့ အခါမှာ အဲဒိစာကို ဖွင့်ဆို ရေးသားထားတဲ့ ကျမ်းများကို ကြည့်ရှုရပါတယ်။ ပါဠိစာပေမှာ ဒီလို အဖွင့်ကျမ်းများ မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ အဋ္ဌကထာ, ဋီကာ , ယောဇနာ, ကဏ္ဌိ, ၀ိဿဇ္ဇနာ, ဒီပနီ,၀ဏ္ဏနာ စတဲ့ ကျမ်းများစွာဟာ စာပေ လေ့လာသူတွေရဲ့ လက်စွဲများ ဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တနောမတိ လို့ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြံဆမှုဟာ အားနည်းချက်များ ရှိနေတတ်လို့ အဖွင့်ကျမ်းများကို အမှီသဟဲ ပြုရတယ်။ မြန်မာဘာသာနဲ့ နိဿယတွေဟာ ဒါမျိုးတွေပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ရေးတဲ့ ပါဠိကို ကိုယ်တိုင် နိဿယ ရေးပါတော့တယ်။ စာဖတ်သူများ အခက်အခဲမတွေ့စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျမ်းကြီး ပဋ္ဌာန်း, ကျမ်းငယ် ဆန်း”လို့ ခေါ်တဲ့ ဆန်းကျမ်းဟာ အလွန် သေးငယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “ဉာဏ်စမ်း ဆန်းတက်”လို့ ဆိုရလောက်အောင် နက်နက်နဲနဲ ရေးထားတာ ဖြစ်လို့ ပါဠိစာပေမှာ အလွန် အရေးပါတဲ့ ကျမ်းငယ် တစ်စောင် ဖြစ်တယ်။ အဓိက ဂါထာ စီကုံးရေးဖွဲ့တဲ့ နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ ဒီကျမ်းငယ်ကို ပါဠိပညာရှင်များ ခုံမင်စွာ လေ့လာ ကြတယ်။ အလွန် ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ဆန်းကျမ်းမှာ လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှု ရှိလာလေလေ ဂါထာအစီအကုံးအနှုန်းအဖွဲ့ ပိုင်နိုင်လာ လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာများကို အဆန်းတကြယ် စီရင်ကြတယ်။ ဉာဏ်ကွန့်မြူးပြီး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးစပ်သီကုံးကြတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ပြောရရင် နားလည်လွယ်အောင် ရေးကြတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ အဆင့်မြင့်မြင့် ရေးကြတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်္ကေတများနဲ့ ရေးကြတယ်။ မျိုးစုံပါပဲ။ မြန်မာပြည်ကို ပါဠိစာပေ ရောက်တဲ့ အချိန်က စပြီး ရေးလိုက်ကြတာ ယနေ့တိုင်ပါပဲ။
ပါဠိစာပေမှာ ပိဋကတ်တော် ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတော်တွေကို စုစည်းထားတာပါ။ ပေစာ , ပုရပိုက်, ကျောက်စာများက စပြီး ပုံနှိပ်စာ, နောက်ဆုံး ဒဂျစ်တယ် အထိ မှတ်တမ်းများ ရှိထားပါတယ်။ ပိဋကတ်တော်မှ အပ တစ်ခြားသော ပါဠိစာပေများ လည်း ရှိပါတယ်။ ပိဋကတ်နွယ်တဲ့ စာတွေ ရှိသလို လုံးဝ မနွယ်တဲ့ စာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ပါဠိစာပေ ပျံ့ပွားရေးမှာတော့ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ အဲဒီမှာ အခြေခံအားဖြင့် “စကားပြေနဲ့ ဂါထာ” နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ ဂါထာတွေက ရွတ်ဆိုရတာ လွယ်ကူတော့ အသုံးများတယ်။ ဘုရားရှိခိုးက စလို့ အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့များအထိ ဂါထာများ စီကုံး အသုံးပြုကြတယ်။ ဥုံ ခံပြီး ရွတ်ရင် စွမ်းတယ်လို့ ပြောပြီး ရွတ်ဖတ်ကြတယ်။ အဓိပ္ပါယ် နားမလည်ပေမယ့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဂမ္ဘီရတ္ထ…နက်နဲတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့, ဂူဠှတ္ထ…လျှို့ဝှက်တဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့ ဂါထာများကို ဖတ်ရှုရတဲ့အခါ သမုဒ္ဒရာအလယ် ယုန်သူငယ် ခြေထောက်၍ မရသကဲ့သို့ ယက်ကန်ယက်ကန် ဖြစ်ရပါတယ်။ အခုလဲ “ဝေဒါသာကု”နဲ့ စတဲ့ ဂါထာလေးဟာ ပါဠိစာပေ ပညာရှင် မဟုတ်တဲ့ ၀ါသနာအရ လေ့လာနေတဲ့ သူတစ်ဦးအတွက် အတော် ခက်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို အကြောင်းသင့်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်မလဲ မသိပါ။ ပဟေဠိကို အဖြေညှိဖို့ အခွင့် ကြုံဦးမှာပါ။
(ဒီဂါထာကို ကြားဖူးသူတွေကိုတော့ တွေ့နေရပါပြီ။ သူတို့လဲ ထူးထူးခြားခြား မသိကြပါ။ ဒါကြောင့် ဆက်လက် မေးမြန်းနေရပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် သိနားလည်သူများ ရှိရင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
This entry was posted on March 31, 2007 at 2:44 pm and is filed under MY REPLY.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “နတ္ထိရဲ့ ပဟေဠိ”
April 1, 2007 at 10:16 am | Reply
ဒီဂါထာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ကျမလည်း စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
ဒါနဲ့ စာရွက်ထဲ ချကူးကြည့်ပြီး သေချာဖတ်ကြည့်တော့ ..
“ဝေဒါသာကု” က ဒေါင်လိုက်လဲ ဖတ်လို့ရနေတာကို တွေ့ရတယ်။
ဒေါင်လိုက်စာလုံးတွေကို တလုံးချင်းလိုက်ဖတ်ရင်လဲ ဒီဂါထာ တပုဒ်ပြန်ဖြစ်အောင် စီစဉ်ရေးသားထားတာပဲ။ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဂါထာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျမရဲ့ ဆရာကြီးတယောက်နဲ့ ကြုံရင် မေးကြည့်ပါအုံးမယ်။
April 1, 2007 at 11:44 am | Reply
မေဓာဝီရေ…ဟုတ်ပဗျာ။ အမြင်အာရုံ စူးရှပါပေတယ်။ တော်တော်တန်တန် ဂါထာတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး။ ဘယ်ပြန်ညာပြန် အပေါ်ပြန်အောက်ပြန် ရေးထားတာ အတော် မြင့်ပါတယ်။ ဒါလေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အဆင်ပြေတဲ့အခါ ကူညီပါဦးနော်။
သိချင်တာ ဒါမျိုးဆန်ဆန်တွေပေါ့.. တင်ပြီးသားထဲက သေသေချာချာ အရင်ရှာလိုက်ပါဦးမယ်။ ပြီးမှပဲ ဒုက္ခပေးတာပေါ့။
June 2, 2007 at 2:35 pm | Reply
Pandora…“ဒုက္ခဿ.နန္တရံ သုခံ” တဲ့။ ဒုက္ခနောက်မှာ သုခရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။ ဟုတ်လားတော့ မသိဘူးဗျာ။ သိရရင် ကောင်းမယ်နော။